अचम्मको safflower तेल
पुरातन समयका देखि, को बिरूवा safflower किसान हुर्किसकेका थिए। यो खाना पकाउने र जीवनमा, एकदम लोक चिकित्सकहरु बीच लोकप्रिय थियो। रक्त नली र हृदयको pathologies हटाइ गर्दा चिनियाँ डाक्टर safflower प्रयोग। प्राचीन मिश्र मा, बोट mummies को पट्टियाँ staining लागि प्रयोग भएको थियो। safflower को सुकेको फूल को पिरामिड मा उत्खनन भेटिए। यो भारत, एशिया र अफ्रिकामा बिरुवाहरु खेती र पछि यो युरोप मा देखियो।
रूस मा Safflower जंगली भगवा भनिन्छ। सुरुमा यो खाना पकाउन र पाक यसको प्रयोग नभेट्टाएको एक मसला, रूपमा हुर्केका थिए। केही हदसम्म पछि, अठारौँ शताब्दीमा, सुन्दर फूल बिरुवाहरु मास्को को उद्यान सजाउनु गर्न थाले। समय, यो safflower तेल बीउ उत्पादन गर्न थाले। यो एक मूल्यवान पौष्टिक उत्पादन भएको थियो। यसको गुणस्तर विशेषताहरु, यो सानो छ सूर्यमुखी तेल गर्न। र थुप्रै तरिकामा यो पनि surpasses।
Safflower तेल, कारण यसको संरचना मा उपस्थितिको देखाइएको छ प्रयोग जो linoleic एसिड को मानव आहार दैनिक पोषक तत्व को एक आवश्यक घटक छ। साथै, उत्पादन उत्कृष्ट गीला विशेषताहरु छ। यो तपाईं निर्जलित छाला व्यवहार गर्न यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
Safflower तेल सुझावको साथ उज्यालो सुगन्ध छ जंगली फूल र थोरै nutty स्वाद। यसलाई पारदर्शी र सुनको छ। Unrefined safflower तेल केहि हल्का। यस मामला मा, यो वस्तुतः कुनै स्वाद र गन्ध छ। एक उत्पादन चिसो वा तातो अहम। पनि प्रयोग र विलायक निकासी को विधि गर्न सकिन्छ। उत्पादन को उत्पादन मा बिरूवा को बीउ प्रयोग।
Safflower तेल, जसको गुण यसको रासायनिक संरचना कारण हो भिटामिन फा, कश्मीर र ई, साथै विभिन्न खनिज समावेश गर्दछ। उत्पादन मा वर्तमान जस्तै सक्रिय पदार्थ glycosides chalcone डेरिवेटिव र serotonin छन्। safflower तेल को संरचना विभिन्न छन् Stearic: एसिड र myristic, palmitic र oleic, linoleic र behenic र eicosapentaenoic lokozagekslenovaya।
सबै दुनिया भर शेफ जस्तै Safflower तेल। को तालु मा, यो एक सूरजमुखी जस्तो देखिन्छ, तर यो फूल जस्तै Smells। सबैभन्दा सामान्यतः यसलाई एशियाली व्यञ्जनहरु मा प्रयोग गरिन्छ। उत्पादन बिन्दु fuming को एक उच्च मान छ। त्यसैले यसलाई frying र बरस रही लागि सिद्ध छ। कारण ठंडा मा तरल स्थिरता retaining solidify छैन safflower तेल को क्षमता, गर्न, यो व्यापक रूप सलाद अक्सर चिसो सेवा गर्दै मा प्रयोग गरिन्छ। mayonnaises र ड्रेसिङ र चिसो व्यञ्जन को तयारी मा उत्पादन लागू हुन्छ।
खाना पकाउने साथै safflower बीउ तेल cosmetology प्रयोग गरिएको छ। जबकि पूर्ण भएको epidermis द्वारा अवशोषित र capillaries को रक्त सुधार यो moisturizes र छाला softens। को safflower बीउ तेल प्रयोग छाला कस गर्न अनुमति दिन्छ। यो पहिले उमेर बढन को संकेत समाप्त। उपचारात्मक उत्पादन एक antiinflammatory र निको एजेन्ट रूपमा सिफारिस गरिएको छ। प्रभावकारी यसलाई सेल्युलाईट विरुद्ध लडाई छ।
चयापचय disturbances, कब्जियत र मधुमेह, मोटोपना र पाचन प्रणाली संग समस्याहरू safflower तेल प्रयोग प्रदर्शन। यो कीरा बाइट्स संग मद्दत गर्छ र पनि choleretic र रूपमा प्रयोग गरिन्छ diuretic।
सिट्रस फल। प्रसिद्ध विदेशी व्यञ्जनहरु बारेमा अज्ञात तथ्य
Paly - स्वादिष्ट माछा। वर्णन, पकाउने सुझाव
इतिहास प्यानकेकहरू। को टाढा विगतका मा एक संक्षिप्त भ्रमण
Gorgonzola: fineness उत्पादन प्रविधि, स्वाद विशेषताहरु, अनुकूलता मासु
औषधीय Leonurus cardiaca: प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
वैविध्यपूर्ण ग्रील्ड माछा: छिटो र स्वादिष्ट
Anapa Dolphinarium: ठेगाना, विवरण, समीक्षा
शर्ट लरेन राल्फ लरेन: विवरण र गुणस्तर
फ्लैश वर्ण र यसको बोध
उड IQ4413 EVO ठाठ3क्वाड: समीक्षा, विनिर्देशों, फोटो, समीक्षा
50 घन मोपेड। तीन नेता
कस्मेटिक लोशन: संरचना, अनुप्रयोग समीक्षा
फ्रिबिएसडि 10: स्थापना र कन्फिगरेसन
मर्मतका, सफाई र ग्रेड उपयोगी गुण को: मुला रोपण गर्दा
शारीरिक सुरक्षा के हो? यो कसरी कार्य गर्दछ र यसको मिशन के हो?
कसरी कल लागि आफ्नो iPhone रिङटोन राख्न। निर्देशन